Onyinye nke Mmụọ Nsọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Onyinye nke Mmụọ Nsọ
Ozi nke Jọn Baptist na nke Jizọs
Jọn Onye Na-eme Baptizim gọnarị na ya bụ Kraịst ahụ mana o kwuru na onye ga-eso ya ga-eji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee baptizim. ( Luk 3:15-16 ) Mgbe Jọn mechara Jizọs baptizim ma na-ekpe ekpere, eluigwe meghere, Mmụọ Nsọ wee dakwasị ya n’ụdị ahụ́. ( Luk 3:21-22 ) Jọn gbaara àmà na ọ hụrụ ́́́́́ Kraịst ka ọ na-agbadata ma nọgide n'ime Kraịst. (Jọn 1:32) Nke a bụ ihe àmà na-egosi na ọ bụ Jizọs bụ onye ji mmụọ nsọ na-eme baptizim nakwa na ọ bụ Ọkpara Chineke. ( Jọn 1:34 ) Mgbe Jizọs natara mmụọ nsọ, ọ malitere ozi ya mgbe ọ dị ihe dị ka afọ iri atọ. ( Luk 30:3 ) O kwuru, sị: “Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n’ahụ́ m, n’ihi na o tewo m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ịkpọsa nnwere onwe nye ndị a dọọrọ n’agha, na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m tọhapụ ndị a na-emegbu emegbu, ịkpọsa afọ nke ihu ọma Jehova.” ( Luk 23:4-18 ) Mgbe e mesịrị baptizim ahụ Jọn kpọsara gasịrị, Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, o wee gaa na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile Ekwensu na-emegbu emegbu, n’ihi na Chineke nọnyeere ya. (Ọrụ 19:10-37)
A ga -eme anyị baptism ya
Jisus si, Iko ahu nke Mu onwem nāṅu, unu gāṅu; ( Mak 10:39-40 ) O kwukwara, sị: “Onye ọ bụla nke kwere na mụ ga-arụkwa ọrụ m na-arụ; ọ ga-arụkwa ọrụ ka ndị a karịa, n’ihi na m na-alakwuru Nna m.” ( Jọn 14:12 ) Ọ bụrụ na ndị ajọ omume maara otú e si enye ụmụ ha ezi onyinye, lee ka Nna nke eluigwe ga-esi enye ndị na-arịọ ya mmụọ nsọ karị! ( Luk 11:13 ) Jizọs tiri mkpu, sị: “Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ onye ọ bụla nkụ, ya bịakwute m ṅụọ. ( Jọn 7:37 ) Onye ọ bụla nke kwere na m, dị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru, ‘Osimiri nke mmiri ndụ ga-esi n’obi ya na-asọpụta.’” ( Jọn 7:38 ) O kwuru nke a banyere Mmụọ Nsọ, ka ndị kweere na ya wee na-asọpụta. ga-anata, n’ihi na e nyebeghị mmụọ nsọ, n’ihi na e nyebeghị Jizọs otuto. ( Jọn 7:39 ) Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-edebe ihe m nyere n’iwu. M ga-arịọkwa Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye inyeaka ọzọ, ka ọ nọrọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi, bụ́ Mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnata.” (Jọn 14:15-16) Onye inyeaka, bụ Mmụọ Nsọ nke nna na-ezite n’aha Jizọs. ( Jọn 14:26 ) O ka ndị na-eso ụzọ ya ga ንን ን ን dታማ (Jọn 16:7)
Chere ruo mgbe enyere gị ike site n'elu
Mgbe a kpọlitere Jizọs n'ọnwụ ma mee ka ndịozi ya mee, ọ gwara ha ka ha ghara isi na Jeruselem, sị: "O wee chere m ná nkwa m: n'ihi na Jọn mere mmiri, ma a ga-eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim n’oge na-adịghị anya ụbọchị ole na ole site ugbu a.” ( Ọrụ 1:2-5 ) Mgbe ụbọchị Pentikọst rutere, ha niile nọkọrọ n’otu ebe—na mberede, ụda dị ka oké ifufe si n’eluigwe bịa, o wee jupụta n’ụlọ ahụ dum ebe ha nọdụrụ ala. (Ọrụ 2:1-2) Asụsụ ndị kewara ekewa dị ka nke ọkụ pụtara ìhè n’ihu ha wee dakwasị ha nile n’otu n’otu—ha nile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche dị ka Mmụọ Nsọ na-enye ha. ( Ọrụ 2:3-4 ) Ma ndị Juu ma ndị na-eso ụzọ ndị Juu nụrụ ka ha na-ekwu n’asụsụ anyị dị ebube nke Chineke.” ( Ọrụ 2:11 ) O wee ju mmadụ niile anya, ha jụkwara onwe ha, sị: “Gịnị ka ihe a pụtara?” Ma ndị ọzọ na-akwa emo sị, “Ha juputara na mmanya ọhụrụ.” (Ọrụ 2:12-13)
Ozizi Pita na Pentikọst
Pita guzoro, ya na ndị ozi iri na otu ahụ, welie olu ya, sị ha: “Ndị a adịghị aṅụbiga mmanya ókè, dị ka unu chere, n’ihi na ọ bụ nanị awa nke atọ nke ehihie—ma nke a bụ ihe e kwuru site n’ọnụ Joel onye amụma.” ( Ọrụ 2:15-16 ) “ ‘Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, na M ga-awụkwasị mmụọ m n’ahụ́ anụ ahụ́ niile, ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma, ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ọhụụ. ndi-okenye-unu gārọ kwa nrọ; ọbụna n’ahụ́ ndị ohu m nwoke na ndị ohu nwaanyị n’ụbọchị ndị ahụ, m ga-awụkwasị mmụọ m, ha ga-ebukwa amụma.’” ( Ọrụ 2:17-18 ) Pita kwukwara, sị: “Jizọs a ka Chineke kpọlitere, ọ bụkwa ya ka e meworo anyị niile. ndị akaebe - ya mere e buliri elu n'aka nri nke Chineke, ebe ọ natakwara nkwa nke Mmụọ Nsọ n'aka Nna Nna ya, ọ wụpụwokwa ihe a unu onwe unu na-ahụ ma na-anụ.” ( Ọrụ 2:32-33 ) Ma, “Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma na Chineke emewo ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a unu kpọgidere n’obe.” ( Ọrụ 2:36 ) Mgbe ha nụrụ nke a, o wutere ha, ha wee gwa Pita na ndịozi ndị ọzọ, sị: “Ụmụnna m, gịnị ka anyị ga-eme?” (Ọrụ 2:37) Pita sịrị ha: “Chegharịanụ ka e meekwa unu baptizim onye ọ bụla n’ime unu n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie, unu ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ—n’ihi na nkwa ahụ bụ maka unu. maka umu-unu na ndi nile nọ n'ebe di anya, onye ọ bula nke Jehova, bú Chineke-ayi, nākpọkuru Ya. ( Ọrụ 2:38-39 ) E mere ndị natara okwu ya baptizim, ha wee tinye onwe ha n’ozizi ndịozi na mkpakọrịta, n’inyawa achịcha na ikpe ekpere—ụjọ wee jide mkpụrụ obi ọ bụla, e nwekwara ọtụtụ ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama. e si n’aka ndịozi mee ya. (Ọrụ 2:41-43)
Na -ekwusa Kraịst n'atụghị egwu nke Mmụọ Nsọ
Ka Pita gara n’ihu, o kwusara, sị: “Ihe Chineke buru n’amụma site n’ọnụ ndị amụma nile, na Kraịst ya ga-ata ahụhụ, o mezuwo otú a: ya mere chegharịanụ, chigharịakwa, ka e wee hichapụ mmehie unu, ka oge ume ọhụrụ wee bịa. site n’iru Jehova.” ( Ọrụ 3:18-20 ) Ka ndịozi ahụ nọgidere na-eje ozi ma na-emegide mmegide ha kpere ekpere maka nkwuwa okwu na-asị: “Onyenwe anyị, lee egwu ha na-eyi egwu, meekwa ka ndị ohu gị nọgide na-ekwu okwu gị n’atụghị egwu nile, mgbe ị na-esetịpụ okwu Gị nile. aka ịgwọ ọrịa, a na-emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube site n’aha ohu gị dị nsọ bụ́ Jizọs.” ( Ọrụ 4:29-30 ) Mgbe ha kpechara ekpere, ebe ha zukọtara maa jijiji, ha niile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ wee nọgide na-ekwu okwu Chineke n’atụghị egwu. (Ọrụ 4:31) N’okpuru mmegide ọzọ, Pita na ndịozi ahụ kwuru, sị: “Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ—Chineke nke nna anyị hà kpọlitere Jizọs, bụ́ onye unu gburu n’osisi n’osisi—Chineke buliri ya elu n’aka nri ya. dị ka Onye Ndú na Onye Nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie - na anyị bụ ndị akaebe nke ihe ndị a, otú ahụ ka Mmụọ Nsọ dịkwa, onye Chineke nyere ndị na-erubere ya isi. (Ọrụ 5:29-32)
Nchigharị nke ndị Sameria
Mgbe Filip kwusara ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst n’obodo Sameria ma kpọsaa ha Kraịst, e mere ha baptizim, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. ( Ọrụ 8:12 ) Ndịozi nọ na Jeruselem nụrụ na Sameria anatawo okwu Chineke, ha zigakwara ha Pita na Jọn ( Ọrụ 8:14 ), bụ́ ndị gbadara kpee ekpere maka ha ka ha nweta mmụọ nsọ (Ọrụ 8:15). 8:16) N’ihi na ọ dabeghị onye ọ bụla n’ime ha, ma e mere ha baptizim nanị n’aha Onyenwe anyị Jizọs. ( Ọrụ 8:17 ) Mgbe ahụ, ha bikwasịrị ha aka n’isi wee nata mmụọ nsọ. (Ọrụ XNUMX:XNUMX)
Ndị Jentaịl na -anata Mụọ Nsọ
Mgbe a kpọrọ Pita ka o kwusaara ndị mba ọzọ ozi ọma, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ, o wee ju ndị kwere ekwe si n’etiti ndị e biri úgwù, bụ́ ndị soro Pita bịa, n’ihi na a wụkwasịrị onyinye nke mmụọ nsọ ọbụna n’isi ndị Juu. N'ihi na ha nānu ka ha nēkwu okwu n'asusu di iche iche nēto kwa Chineke. (Ọrụ 10:44-46) Pita kwuru, sị: “Ọ̀ dị onye ọ bụla pụrụ igbochi mmiri ime ndị a baptizim, bụ́ ndị natara Mmụọ Nsọ dị ka anyị nwetara?” – ma o nyere iwu ka e mee ha baptizim n’aha nke Jisus Kraịst. ( Ọrụ 10:47-48 ) Mgbe ọ na-akọ ihe mere ndị kwere ekwe nọ na Jeruselem, o kwuru, sị: “Mgbe m malitere ikwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha dị ka ọ dakwasịrị anyị ná mmalite. M'we cheta okwu Onye-nwe-ayi, otú Ọ siri, Jọn were miri me baptism, ma agēji Mọ Nsọ me unu baptism. – Ya mere, ọ bụrụ na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ nke o nyere anyị mgbe anyị kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye m na m nwere ike iguzo n'ụzọ Chineke?” ( Ọrụ 11:15-17 ) Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha gbachiri nkịtị wee too Chineke, sị: “Ya mere, Chineke enyewokwa ndị mba ọzọ nchegharị nke na-eduba ná ndụ.” ( Utom 11:18 ) Ke ukperedem ke esop Jerusalem, Peter ama ọdọhọ ete: “Abasi emi ọfiọkde esịt, ama ọn̄wọn̄ọ ọnọ mmọ, ke ndinọ mmọ edisana spirit kpa nte Enye ọkọnọde nnyịn; ebe ha ji okwukwe mee ka obi ha dị ọcha.” ( Ọrụ 15:8-9 ) Mgbe Pita na-ekwu na e kwesịghị ịtụ anya ka Ndị Kraịst bụ́ ndị Jentaịl na-agbaso Iwu Mozis, sị: “Gịnị mere unu ji na-anwale Chineke site n’itinye yok n’olu nke ndị na-eso ụzọ ya ka unu na-anwa Chineke? ọ̀ bughi nna-ayi-hà ma-ọbu ayi apughi ibū? Ma anyị kwenyere na a ga-azọpụta anyị site n'amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dị ka ha ga-esi. " (Ọrụ 15:10-11)
Ndị Jentaịl na -enweta Mmụọ Nsọ site n'ije ozi Pọl
Ka Pọl na-ekwusa ozi ọma, ọ hụrụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jọn, sị ha: “Ùnu natara mmụọ nsọ mgbe unu kweere?” Azịza ha bụ na a nụghịdị na e nwere Mmụọ Nsọ nakwa na e mere ha baptizim n’ime baptizim Jọn. ( Ọrụ 19:1-3 ) Pọl kwuru, sị: “Jọn ji baptizim nke nchegharị mee baptizim, na-agwa ndị mmadụ ka ha kwere n’Onye ahụ nke gaje ịbịa n’azụ ya, ya bụ, Jizọs.” ( Ọrụ 19:4 ) Mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs, mgbe Pọl bikwasịrị ha aka n’isi, mmụọ nsọ dakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche na ibu amụma. (Ọrụ 19:5-6)
Ike mbilite n'ọnwụ nke Mmụọ Nsọ
Anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs ka e mere baptizim baa n’ọnwụ ya. (Ndị Rom 6:3) Ya mere e liri anyị na ya site na baptizim baa n'ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si ná ndị nwụrụ anwụ site n'ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee na-ejegharị n'ọhụụ nke ndụ. ( Ndị Rom 6:4 ) A sachara unu, edoro unu nsọ, bụrụ ndị ezi omume n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na site n’ike mmụọ nsọ nke Chineke anyị. (1 Ndị Kọrint 6:11) Awụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke e nyeworo anyị. (Ndị Rom 5:5) Mmụọ na-enyere anyị aka n'adịghị ike anyị - n'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga-ekpe ekpere dị ka anyị kwesịrị, ma Mmụọ Nsọ na-arịọchitere anyị na-asụ ude nke ukwuu nke ikwu okwu - nke na-enyocha obi na-amata ihe bụ uche nke Chineke. Mụọ, n’ihi na Mụọ Nsọ na-arịọchitere ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke siri dị. (Ndị Rom 8:26-27)
Site n'ike nke Mmụọ Nsọ, anyị na -ejupụta n'olileanya
Chineke nke olile-anya nēmeju ndi kwere ekwe n'ọṅù na udo, ka ha we juputa n'ike nke Mọ Nsọ n'olile-anya. ( Ndị Rom 15:13 ) Ònye ma echiche mmadụ ma e wezụga mmụọ nke onye ahụ, nke dị n’ime ya? – Ya mere, ọ dịghịkwa onye na-aghọta echiche nke Chineke ma e wezụga Mụọ nke Chineke. (1 Ndị Kọrint 2:11) Ugbu a, anyị anataghị mmụọ nke ụwa, kama mmụọ nke sitere na Chineke, ka anyị wee ghọta ihe ndị Chineke nyere anyị n'efu. (1 Ndị Kọrịnt 2:12) Ihe akaebe nke ndị kwere ekwe dị dị ka akwụkwọ ozi nke sitere na ink kama ọ bụghị mmụọ nke Chineke dị ndụ. (2 Ndị Kọrint 3:3) Otú ahụ ka obi ike anyị nwere site n’aka Kraịst n’ebe Chineke nọ—ọ bụghị na anyị zuru ezu n’onwe anyị ikwu ihe ọ bụla na-esi n’aka anyị pụta, kama izuzu anyị sitere na Chineke, bụ́ onye meworo ka anyị zuo ezu ịbụ ndị ozi nke Chineke. ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke akwụkwọ ozi, kama nke Mmụọ Nsọ. N'ihi na akwukwọ ahu nēb͕u, ma Mọ Nsọ nēnye ndu. ( 2 Ndị Kọrint 3:4-6 ) Onye ahụ nke na-enye unu Mmụọ Nsọ ma na-arụ ọrụ ebube n’etiti anyị adịghị eme otú ahụ site n’ọrụ nke iwu kama site n’ịnụ ihe n’okwukwe—dị nnọọ ka Ebreham “kwere na Chineke, e wee gụnye ya nye ya dị ka ihe atụ. ezi omume.” ( Ndị Galeshia 3:5-6 ) Kraịst gbapụtara anyị n’ọnụ nke iwu site n’ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị—n’ihi na e dewo ya, sị, “Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla nke a kwụgidere n’elu osisi bụ—ka e wee gọzie Abraham n’ime Kraịst Jizọs Kraịst. we biakute ndi mba ọzọ, ka ayi we nara Mọ nke ekwere na nkwa site n'okwukwe. (Ndị Galetia 3:13-14) Ihe Kraịst meworo iji weta ndị Jentaịlụ irube isi bụ site n’ike nke ihe ịrịba ama na ihe ebube—site n’ike nke Mmụọ nke Chineke. (Ndị Rom 15:18-19)
A ga -amụrịrị gị ọzọ dịka nwa Chineke
Jizọs sịrị: “N’ezie, n’ezie, a sị m unu, Ọ gwụla ma a mụghị mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke—ọ gwụla ma a mụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịbanye n’alaeze Chineke. (Jọn 3:3-5) Ihe a mụrụ site n’anụ ahụ́ bụ anụ ahụ́, ihe ahụ e sikwa na mmụọ nsọ mụọ bụ mmụọ. ( Jọn 3:6 ) Ya ejula gị anya na m gwara gị, A ghaghị ịmụ gị ọzọ. ( Jọn 3:7 ) Ifufe na-efe n’ebe ọ masịrị, ị na-anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa ma ọ bụ ebe ọ na-eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na mmụọ nsọ.” ( Jọn 3:8 ) O kwukwara, sị: “Oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ na n’eziokwu, n’ihi na ndị dị otú ahụ ka Nna m na-achọ ka ha na-efe ya. (Jọn 4:23) Chineke bụ mmụọ, ndị na-efe ya aghaghịkwa ife ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.” ( Jọn 4:24 ) Ọ bụrụ na unu na-ebi ndụ dị ka anụ ahụ́ si dị, unu ga-anwụ, ma ọ bụrụ na unu ejiri mmụọ nsọ gbuo omume anụ ahụ́, unu ga-adị ndụ. ( Ndị Rom 8:13 ) N’ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:14)
Mmụọ bụ ndụ - nkuchi anyị dịka ụmụ nwoke
Unu anọghị n'anụ ahụ, kama n'ime mmụọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke bi n'ime gị - onye ọ bụla nke na-enweghị mmụọ nke Kraịst abụghị nke ya. ( Ndị Rom 8:9 ) Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n’ime unu, ọ bụ ezie na ahụ́ ahụ nwụrụ anwụ n’ihi mmehie, mmụọ nsọ bụ ndụ n’ihi ezi omume. ( Ndị Rom 8:10 ) Ọ bụrụ na mmụọ nke Onye ahụ kpọlitere Jizọs n’ọnwụ bi n’ime unu, onye ahụ kpọlitere Kraịst Jizọs n’ọnwụ ga-emekwa ka ahụ́ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n’ime unu. (Ndị Rom 8:11) Ọ bụghị mmụọ nke ịbụ ohu ịdaba azụ n'ụjọ, kama ọ bụ Mmụọ nke e doro dị ka ụmụaka, bụ́ onye anyị na-etiku site n’aka ya, “Aba! Nna!” ( Ndị Rom 8:15 ) Mmụọ nsọ na-eso mmụọ anyị na-agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke, ọ bụrụkwa na anyị bụ ụmụ, e mesịa, ndị nketa—ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na-eketakọ ihe, ma ọ bụrụhaala na anyị na ya na-ata ahụhụ ka e wee werekwa nye anyị otuto. ya. (Ndị Rom 8:16-17) Ahụhụ ndị dị n’oge a abaghị uru iji tụnyere ebube ahụ nke gaje ikpughe—n’ihi na ihe e kere eke na-echere oké ọchịchọ maka mkpughe nke ụmụ Chineke. ( Ndị Rom 8:18-19 ) Ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na-asụ ude n’ime ha na-echere nkuchi dị ka ụmụ, ihe mgbapụta nke ahụ́. (Ndị Rom 8:23)
Isi mmalite nke okwu Kraịst gụnyere ntọ-ala nke nchegharị site n'ọrụ ndị nwụrụ anwụ na nke okwukwe nke dị na Chineke na ozizi nke baptism na nke ibikwasị aka na nke mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ na nke ikpe ebighi ebi maka ndị ahụ. ndi ridaraworo na baptism ma detuwo onyinye-inata-iru-ọma ahu nke sitere n'elu-igwe, nata kwa Mọ Nsọ, detuwo kwa ezi okwu Chineke ire, na ike nke uwa nke gaje ibia. ( Ndị Hibru 6:1-5 Lamsa ) N’ime Jizọs, e ji ibi úgwù nke e jighị aka mee anyị úgwù, site n’iyipụ ahụ nke anụ ahụ́, site n’ibi úgwù nke Kraịst, ebe e liri anyị na ya na baptizim, bụ́ nke e mekwara ka anyị si n’ọnwụ bilie n’ime ya. ya na ya site n'okwukwe n'ọlu di ike nke Chineke, Onye mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie. (Ndị Kọlọsi 2:11-12) Chegharịa ma mee baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị, ị ga-anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ—n’ihi na nkwa ahụ bụ maka gị na ụmụ gị na ndị niile. nọ n'ebe di anya, onye ọ bula nke Jehova, bú Chineke-ayi, nākpọkuru Ya. (Ọrụ 2:38-39)
Ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche na ikpe ekpere n'ime mmụọ
Na-achụso ịhụnanya, ma na-achọsi onyinye nke mmụọ nsọ ike. (1 Ndị Kọrint 14:1) Onye na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche na-ekwu okwu, ọ bụghị Chineke; n'ihi na ọ dighi onye nāghọta Ya, kama Ọ nēkwu ihe-omimi nime Mọ Nsọ. (1 Ndị Kọrint 14:2) Ọ dị mma ka anyị nile na-asụ asụsụ dị iche iche ebe ọ bụ na ndị na-asụ asụsụ na-ewuli onwe ha elu. (1 Ndị Kọrint 14:4) Mgbe ọ na-ekpe ekpere n’asụsụ dị iche iche, mmụọ nsọ na-ekpe ekpere ma uche adịghị amịpụta. (1 Ndị Kọrint 14:14) Gịnị ka m ga-eme? M ga-eji mmụọ m kpee ekpere, ma m ga-eji uche m kpee ekpere; M'gēji mọm bù abù, ma M'gābù kwa abù n'obim. (1 Ndị Kọrint 14:15) Pọl kelere Chineke na o ji asụsụ dị iche iche asụ karịa ndị ọzọ. ( 1 Ndị Kọrịnt 14:18 ) Machibidola ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche. (1 Ndị Kọrint 14:39)
Ibu amụma n'ime Mmụọ
Anyị kwesịrị ịchọsi onyinye ime mmụọ ike, karịsịa ka anyị nwee ike ibu amụma. (1 Ndị Kọrint 14:1) Onye na-ebu amụma na-agwa ndị mmadụ okwu maka iwuli ha elu na agbamume na nkasi obi. (1 Ndị Kọrint 14:3) Onye na-ebu amụma na-ewuli ọgbakọ elu dị ka onye na-ebu amụma ka onye na-asụ asụsụ dị iche iche ukwuu. (1 Ndị Kọrint 14:5) N’ọgbakọ ọ ka mma ikwu okwu n’ụzọ kwere nghọta iji kụziere ndị ọzọ ihe, karịa ọtụtụ okwu n’asụsụ dị iche iche. (1 Ndị Kọrint 14:19) Ya mere, ọ bụrụ na ọgbakọ dum na-ezukọta ma na-asụ asụsụ dị iche iche, ndị si ná mba ọzọ ma ọ bụ ndị na-ekweghị ekwe abanyekwa, ọ̀ bụ na ha agaghị asị na unu enwewo uche? (1 Ndị Kọrint 14:23) Ma ọ bụrụ na mmadụ nile na-ebu amụma, ma onye na-ekweghị ekwe ma ọ bụ onye mba ọzọ abata, mmadụ nile na-ama ya ikpe, mmadụ nile na-akpọkwa ya ikpe, ihe nzuzo nke obi ya na-ekpughe, ya mere, ọ daa kpudo ihu n'ala, ọ ga-ada n'ihu ya. ga-efe Chineke ma kwupụta na Chineke nọ n’etiti unu n’ezie. (1 Ndị Kọrint 14:24-25)
Ma e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ; ma e nwere ozi dị iche iche, ma otu Onye-nwe; e nwekwara ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ otu Chineke ahụ na-enye ha niile ike n’ime mmadụ niile. (1 Ndị Kọrint 12:4-6) A na-enye onye kwere ekwe ọ bụla ihe ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma ọha. (1 Ndị Kọrint 12:7) Site na mmụọ nsọ, a na-enye onyinye dị iche iche gụnyere ikwupụta amamihe, ikwu okwu nke ihe ọmụma, okwukwe, onyinye ọgwụgwọ, ịrụ ọrụ ebube, amụma, ikike ịmata ọdịiche dị n'etiti mmụọ, ụdị asụsụ dị iche iche, na nkọwa nke asụsụ. (1 Ndị Kọrint 12:8-10) Ihe ndị a nile na-enye ike site n’otu mmụọ ahụ, bụ́ onye na-ekenye onye kwere ekwe n’otu n’otu otú ọ masịrị ya. (1 Ndị Kọrint 12:11) N'ihi na dị nnọọ ka ahụ́ ahụ bụ otu ma nwee ọtụtụ akụkụ, akụkụ ahụ́ nile, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, bụ otu ahụ́, otú ahụ ka ọ dịkwa n'ebe Kraịst nọ. (1 Ndị Kọrint 12:12) N'ihi na n'otu mmụọ ka a na-eme ndị kwere ekwe baptizim baa n'otu ahụ—ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe ha—na-emekwa ka ha ṅụọ site na otu Mmụọ. (1 Ndị Kọrint 12:13) Anyụla mmụọ nsọ ma ọ bụ eleda amụma anya, kama nwalee ihe niile - jidesie ezi ihe ike. (1 Ndị Tesalonaịka 5:19-21)
Ịrụ ọrụ n'ime Mmụọ Nsọ
N'ime Kraịst, anyị ga-ejupụta na Chineke na-anata ume dị nsọ ya. (Ndị Galeshia 3:14) Site na Mmụọ Nsọ ahụ e debere n'ime anyị, anyị na-aghọ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ. (1 Ndị Kọrint 3:16) Ndụ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ na-eme ka anyị dị ọcha ma na-amanye anyị n’ezi omume nile. (Ndị Rom 8:10) Site n’aka Kraịst, Chineke na-awụsa n’ime anyị mmiri dị ndụ nke Mmụọ Nsọ, na-emeju obi anyị n’ịhụnanya, na-enye anyị udo pụrụ iche n’ọṅụ nke a na-apụghị ikwu n’ụzọ ọ bụla. ( Ndị Rom 5:5 ) Anyị ekwesịghị ije ozi n’okpuru iwu ochie e dere ede, kama n’ime ndụ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ. (Ndị Rom 7:6) Anyị agaghịkwa akụzi okwu amamihe dị na ya ma e wezụga Mmụọ Nsọ, ka e wetulata obe Kraịst. (1 Ndị Kọrint 1:17) Kama, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-anọ ọdụ chere ka e nye anyị ike sitere n’Elu. (Luk 11:13) Mmụọ Nsọ ga-abụ ike anyị na-akpagharị—ịgbanwe, ịrịọchite ọnụ, na inye anyị ike dịka uche Chineke siri dị. (2 Ndị Kọrint 3:18) A na-eje ozi nke mgbapụta n'ụzọ ọrụ ebube site n'ebe e wusiri ike nke ndị mmụọ ọjọọ n'ike nke Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 10:38 ) Amụma esiteghị n’uche mmadụ, kama mgbe mmadụ na-ekwu okwu site n’aka Chineke dị ka Mmụọ Nsọ na-enye njikọ Chineke ma buru ya gaa. (2 Pita 1:21) A na-eme ka ihe ịrịba ama na ihe ebube pụta ìhè site n'ike nke Mmụọ Nsọ. (Ndị Rom 15:19) Nkwuwa okwu na mkpali anyị bụ ime ka ume nke Chineke a dị ike. ( Ọrụ 4:31 ) Ọ bụ ezie na eziokwu nke Okwu Chineke bụ nri anyị siri ike, Mmụọ Chineke bụ ihe ọṅụṅụ anyị. (Ndị Efesọs 5:18)
Isi Akwụkwọ Nsọ
Ka ndị mmadụ nọ na -atụ anya, na mmadụ niile na -ajụ n'ime obi ha gbasara Jọn ma ọ bụ Kraịst, Jọn zara ha niile, sị, "Eji m mmiri mee unu baptizim, mana onye ka m ike na -abịa, eriri ahụ onye mụ onwe m na -erughị eru ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga -eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim.
Ugbu a mgbe emere mmadụ niile baptizim, na mgbe e mekwara Jizọs baptizim ma na -ekpekwa ekpere, eluigwe meghere, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ya n'anụ ahụ, dị ka nduru; olu we si n'elu -igwe da, si, I bu Ọkparam M'huru n'anya; na gị enwere m obi ụtọ. Mgbe Jizọs malitere ozi ya, ọ dị ihe dị ka afọ iri atọ.
“Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ikwusara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ ịhụ ụzọ, ịtọhapụ ndị a na -emegbu emegbu, ikwusa afọ nke amara Onyenwe anyị. ”
Luk 11:13 (NLT)
Ọ bụrụ na unu, ndị ajọ mmadụ, mara ka e si enye ụmụ unu ezi onyinye, lee ka Nna nke eluigwe ga -esi nye ndị na -arịọ ya mmụọ nsọ! ”
Ha wee sị ya, “Nye anyị ohere ka anyị nọdụ ala, otu n'aka nri gị, otu onye n'aka ekpe gị, n'ebube gị." Jisus siri ha, Unu amataghi ihe unu nāriọ. Ị nwere ike ị drinkụ iko m na -a drinkụ, ma ọ bụ ka e mee gị baptizim nke a na -eme m baptizim? ” Ha we si ya, Ayi nwere ike. Jisus we si ha, Iko nke Mu onwem gā drinku ka unu gā drinku; na baptizim nke a na -eme m baptizim, a ga -emekwa gị baptizim, mana ịnọdụ ala n'aka nri m ma ọ bụ n'aka ekpe m abụghị nke m inye, kama ọ bụ maka ndị akwadoro ya. "
N'echi ya, ọ hụrụ Jizọs ka ọ na -abịakwute ya, o wee sị, “Lee Nwa Atụrụ Chineke nke na -ewepụ mmehie nke ụwa! Onye a bu Onye mu onwem kwuru okwu bayere Ya, si, Otù Nwoke nābia n'azum Onye ghọworo Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri Onye mbu n'ebe m'nọ. Mụ onwe m amataghị ya, kama ọ bụ ka e kpugheere ya Israel ihe a ka m ji bịa na -eme baptizim. ” Jọn wee gbaa ama: “Ahụrụ m mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe rịdata dị ka nduru, ọ dịgidekwara n'isi ya. Mu onwem amaghi Ya: ma Onye ziterem ka m'were miri me baptism, Onye ahu sirim, Onye ọ bula I gāhu Mọ Nsọ ka Ọ n descendfedakwasi kwa n'aru Ya, Onye ahu bu Onye n withji Mọ Nsọ eme baptism. Ahụwokwa m na -agba ama na onye a bụ Ọkpara Chineke. ”
Jọn 3: 3-8
Jizọs zara ya, “N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ ọzọ ọ nweghị ike ịhụ alaeze Chineke. ” Nikọdimọs sịrị ya, “Olee otu a ga -esi mụọ mmadụ mgbe o mere agadi? Ọ̀ pụrụ ịbanye n'afọ nne ya nke ugboro abụọ ka a mụọ ya? " Jisus zara, “N'ezie, n'ezie, asim unu, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ site na mmiri na Mmụọ, ọ nweghị ike ịbanye n'alaeze Chineke. Ihe a mụrụ site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, ihe a mụrụ site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. Ifufe na -efega ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa na ebe ọ na -eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ."
Jọn 7: 37-39
N'ụbọchị ikpeazụ nke oriri ahụ, bụ nnukwu ụbọchị, Jizọs biliri wee tie mkpu, sị, "Ọ bụrụ na akpịrị na -akpọ onye ọ bụla ọkụ, ya bịakwute m drinkụọ mmiri. Onye ọ bụla nke kwere na m, dịka akwụkwọ nsọ kwuru, 'Osimiri nke mmiri ndụ ga -esi n'ime ya na -asọpụta'" Ma nka ka O kwuru bayere Mọ Nsọ, nke ndi kwere na Ya gaje inara: n'ihi na enyeghi Mọ Nsọ ub ,u a, n'ihi na ak wasnyeghi Jisus otuto..
N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye ọ bụla kwere na m ga -arụkwa ọrụ m na -arụ; ọ ga -arụkwa ọrụ karịrị ndị a, n'ihi na m na -alakwuru Nna m.
Jọn 14: 15-17
"Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga -edebe iwu m. M ga -arịọkwa Nna m, ọ ga -enyekwa unu onye inyeaka ọzọ, ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi, ọbụna Mmụọ nke eziokwu, nke ụwa enweghị ike ịnata, n'ihi na ọ dịghị ahụ ya ma ọ bụ mara ya. Ị maara ya, n'ihi na ọ na -ebi n'ime gị, ọ ga -anọkwa n'ime gị.
Jọn 14: 25-26
Okwu ndia ka M'gwaworo unu mb Ie Mu na unu nọ. Mana inyeaka, Mmụọ Nsọ, onye Nna ga -ezite n'aha m, ọ ga -akụziri gị ihe niile wee chetara gị ihe niile m gwara gị.
Ka o sina dị, ana m agwa gị eziokwu: ọ baara gị uru ka m laa, n'ihi na ọ bụrụ na alaghị m, Onye inyeaka agaghị abịakwute gị. Ma ọ bụrụ na m agaa, m ga -ezitere unu ya.
Ma mb whilee Ya na ha nānọ, O nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pua; ma ichere nkwa nke Nna, nke, ọ sịrị, “ị nụrụ n'ọnụ m; n'ihi na Jọn jiri mmiri mee baptism, mana a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptism ụbọchị ole na ole site ugbu a. ”
—Ọrụ 2: 1-4,12, 13-XNUMX.
Mgbe ụbọchị Pentikọst bịarutere, ha niile gbakọtara n'otu ebe. Na mberede, ụda sitere n'eluigwe dara dịka oke ifufe na -efesi ike, o wee jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ewe me ka ha hu ire di iche iche dika ire ọku, o we dakwasi onye ọ bula nime ha. Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu... O we ju ha nile anya, ha we tua egwu, ha we sirita onwe-ha, Gini ka nka bu? Ma ndị ọzọ na-akwa emo kwuru, sị, "Ha jupụtara na mmanya ọhụrụ."
Ọrụ 2: 16-21
Ma nka bu ihe ekwuru site n’aka Joel onye amuma:
"'Chineke ga -ekwukwa n'ụbọchị ikpeazụ, sị,
na m ga -awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile,
ọbuná n'isi umu-okorọbiam, na inyom
M ga-egosi ihe ebube n’eluigwe dị n’elu
na ihe ịrịba ama n’elu ụwa,
ọbara, na ọku, na alulu anwuru-ọku;
anyanwụ ga-agbanye n’ọchịchịrị
ọnwa na ọbara,
tutu ubọchi Onye -nwe -ayi abia, bú ubọchi uku ahu di kwa ebube.
Ma ọ ga -eru na onye ọbụla nke ga -akpọku aha Onye -nwe ka a ga -azọpụta.
Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. ” Ma mb whene ha nuru nka, o wutere ha, ha we si Pita na ndi -ozi fọduru, Umu -nna -ayi, gini ka ayi g ?me? Ma Pita sịrị ha,Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.. N'ihi na nkwa ahụ dịịrị gị na ụmụ gị na ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla Onye -nwe Chineke anyị na -akpọ onwe ya. ” Na ọtụtụ okwu ndị ọzọ ọ gbara ama wee gaa n'ihu na -agba ha ume, na -asị, "zọpụta onwe unu n'ọgbọ a gbagọrọ agbagọ." Ya mere, e mere ndị natara okwu ya baptizim, e tinyekwara ihe dị ka puku mkpụrụ obi atọ n'ụbọchị ahụ. Ha we were onwe -ha nye Jehova ozizi ndị ozi na nmekọ, n'inyawa achicha na ekpere.
Ọrụ Ndị Ozi 4: 31 (NIV)
Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ha nọkọtọrọ na ya me nkpatu, ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu.
Ọrụ 5: 29-32
Ma Pita na ndị ozi zara, “Anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ. Chineke nna -ayi -hà mere ka Jisus si n'ọnwu bilie, Onye unu onwe -unu b byuru, nākwuba Ya n'elu osisi. Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. Ayi onwe -ayi bu kwa ndi -àmà nke ihe ndia, ọ bụkwa otú ahụ ka Mmụọ Nsọ, onye Chineke nyere ndị na -erubere ya isi. "
Ma mgbe ha kwenyere Filip ka ọ na -ekwusa ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst, e mere ha baptizim, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Ọbụna Saịmọn n'onwe ya kwere, mgbe e mekwara ya baptizim, ọ gara n'ihu soro Filip. Ma mb wase ọ huru ihe -iriba -ama na ọlu -ebube di uku, ibobo nwuru Ya n'aru. Mgbe ndị ozi nọ na Jerusalem nụrụ na Sameria anabatala okwu Chineke, ha zigaara ha Pita na Jọn, ndị rịdatara kpere ha ekpere ka ha nata Mmụọ Nsọ, n'ihi na ọ gbabeghị onye ọ bụla n'ime ha, kama emere ha baptizim naanị n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka n'isi, ha wee nata Mmụọ Nsọ.
Mgbe Pita ka na -ekwu ihe ndị a, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. Ibobo we nwua ndi kwere n'aru, ndi sitere n'ibì -úgwù, ndi soro Pita bia; N'ihi na ha nānu ka ha n speakingkwu okwu n'asusu di iche iche n andto kwa Chineke. Mgbe ahụ Pita kwuru, "Ọ nwere onye nwere ike igbochi mmiri ime ndị a baptizim, ndị natara mmụọ nsọ dịka anyị natara?"O nyekwara ha iwu ka eme ha baptizim n'aha Jizọs Kraịst ...
Ọrụ 11: 15-18
Ka m malitere ikwu okwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha dịka ọ dakwasịrị anyị na mbido. M'we cheta okwu Onye -nwe -ayi, otú Ọ siri,Jọn ji mmiri mee baptism, ma a ga -eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim. ' Ọ bụrụkwa na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ dịka o nyere anyị mgbe anyị kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye m bụ ka m nwee ike guzo n'ụzọ Chineke? ” Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha agbachi nkịtị. Ha we nye Chineke otuto, si, Ọ bu kwa ndi mba ọzọ ka Chineke nyeworo nchegharị nke n todubà na ndu.
Ọrụ 15: 8-11
Na Chineke, Onye maara obi, gbaara ha ama, site n'inye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị, o meghịkwa ihe dị iche n'etiti anyị na ha, ebe o mere ka obi ha dị ọcha site n'okwukwe.. Ma ub thereforeu a, gini mere unu nānwa Chineke site n'itinye yoke n'olu ndi n disciplesso uzọ nke ma nna -ayi -hà ma ayi onwe -ayi apughi ib bear? Mana anyị kwenyere na a ga -azọpụta anyị site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dịkwa ka ha ga -azọpụta. ”
O we si ha, Didnu natara Mọ Nsọ mb youe unu kwere? Ha wee sị, "Ee e, anyị anụbeghị na mmụọ nsọ dị." O we si, Gini kwa ka emere gi baptism? Ha sịrị, "N'ime baptizim Jọn." Ma Pọl sịrị, “Jọn jiri baptism nke nchegharị mee baptism, na -agwa ndị mmadụ ka ha kwere n'onye na -abịa n'azụ ya, ya bụ, Jizọs." Mgbe ha nụrụ ihe a, e mere ha baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Ma mb hade Pọl bikwasiri ha aka -ya abua n'isi, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche na ibu amụma. Ha dị ihe dị ka ndị ikom iri na abụọ.
Ndị Rom 6: 2-4
Olee otu anyị ndị nwụrụ nye mmehie ga -esi ebi n'ime ya? ùnu amataghi na ayi nile ndi emere baptism iba nime Kraist Jisos ka emere baptism iba n'onwu ya? Ya mere, e liri anyị na ya site na baptism n'ime ọnwụ, ka, dị nnọọ ka a kpọlitere Kraịst n'ọnwụ site n'ebube nke Nna, anyị onwe anyị nwekwara ike na -ejegharị na ndụ ọhụrụ.
Ndị Rom 5: 5 (NIV)
olileanya adịghịkwa eme anyị ihere, n'ihi na awụsawo ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke enyere anyị.
Ndị Rom 8: 9-11
Ma gị, anọghị n'anụ ahụ kama ọ bụ n'ime mmụọ, ọ bụrụ n'ezie na mmụọ nke Chineke bi n'ime gị. Onye ọ bụla nke na -enweghị mmụọ nke Kraịst abụghị nke ya. Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n'ime gị, n'agbanyeghị na ahụ nwụrụ anwụ n'ihi mmehie, Mmụọ bụ ndụ n'ihi ezi omume. Ọ bụrụ na Mmụọ nke onye mere ka Jisọs si na ndị nwụrụ anwụ biri n'ime gị, onye ahụ mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie ga -emekwa ka ahụ gị na -anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ ya nke bi n'ime gị..
Ndị Rom 8: 14-17
n'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke. N'ihi na unu anataghị mmụọ nke ịbụ ohu ka unu wee malite ịtụ egwu ọzọ, ma unu anatala mmụọ nke ido dị ka ụmụ, site na ya anyị na -eti mkpu, "Aba! Nna!" Mmụọ nsọ n'onwe ya so mmụọ anyị na -agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke, ọ bụrụkwa na anyị bụ ụmụ, anyị bụ ndị nketa — ndị nketa nke Chineke na ndị ha na Kraịst na -eketakọ ihe., ọ bụrụhaala na anyị esoro ya na -ata ahụhụ, ka e wee meekwa ka anyị na ya dị ebube.
Ndị Rom 8: 22-23
N'ihi na anyị maara na ihe niile e kere eke na -asụkọ ude site n'ihe mgbu nke ịmụ nwa ruo ugbu a. Ma ọ bụghị naanị okike, ma anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike maka ịbụ ụmụ, mgbapụta nke ahụ anyị.
Ndị Rom 8: 26-27
N'otu aka ahụ Mmụọ nsọ na -enyere anyị aka n'adịghị ike anyị. N'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga -arịọ maka ya dị ka anyị kwesịrị, mana Mmụọ n'onwe ya na -arịọchitere anyị arịrịọ site n'ịsụ ude miri emi maka okwu.. Na onye na -enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ, n'ihi na Mmụọ na -arịọrọ ndị nsọ arịrịọ dika uche Chineke si di.
Ndị Rom 15: 13-19
Ka Chineke nke olileanya mee ka unu jupụta n'ọ joyụ niile na udo niile n'ime ikwere, ka unu we nwebiga olile -anya site n'ike nke Mọ Nsọ. Enwere m afọ ojuju banyere unu, ụmụnna m, na unu onwe unu juputara n'ịdị mma, jupụta n'ihe ọmụma niile ma nwee ike ịkụziri ibe unu ihe. Ma n'ihe ụfọdụ, edegaara m gị akwụkwọ n'atụghị egwu site na ncheta, n'ihi amara nke Chineke nyere m ka m bụrụ onye ozi nke Kraịst Jizọs nye ndị mba ọzọ n'ozi nchụaja nke ozi ọma nke Chineke, ka onyinye nke Ndị mba ọzọ nwere ike ịnabata, nsọ site na Mụọ Nsọ. Ya mere, nime Kraịst Jizọs, enwere m ihe mere m ga -eji na -anya isi maka ọrụ m na -arụ maka Chineke. N'ihi na agaghị m anwa ikwu okwu banyere ihe ọ bụla ma e wezụga ihe Kraịst mezuru site n'aka m iji mee ka ndị mba ọzọ rube isi -site n'okwu na omume, site n'ike nke ihe iriba ama na ihe ebube, site n'ike nke Mmụọ nke Chineke—Ya mere na site na Jerusalem na gburugburu ya ruo Ilirikọm emezuwo m ozi nke ozi ọma nke Kraịst;
1 Ndị Kọrịnt 2: 10-12
Ma a sachara unu, e doro unu nsọ, a gụrụ unu n'onye ezi omume n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na site na Mmụọ nke Chineke anyị.
1 Ndị Kọrịnt 12: 4-11
Ugbu a, e nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu Mmụọ ahụ; ụdị ozi dị iche iche dị, ma otu Onyenwe anyị ahụ dị; na ụdị ọrụ dị iche iche, mana ọ bụ otu Chineke ahụ na -enye ha ike n'ime mmadụ niile. E nyere onye ọ bụla ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma niile. N'ihi na otu onye ka e nyere site na Mmụọ ikwu okwu amamihe, nyekwa onye ọzọ ikwupụta ihe ọmụma dịka otu mmụọ ahụ si dị, nyekwa okwukwe ọzọ site n'otu mmụọ ahụ, nyekwa onye ọzọ onyinye ịgwọ ọrịa site n'otu mmụọ, nyekwa onye ọzọ ọrụ ebube. , nye amụma ọzọ, nye onye ọzọ ike ịmata ọdịiche dị n'etiti mmụọ, nye onye ọzọ ụdị asụsụ dị iche iche, nye onye ọzọ nkọwa nke asụsụ. Ihe ndị a niile na -enye ike site n'otu mmụọ nsọ, onye na -ekenye onye ọ bụla n'otu n'otu dịka ọ chọrọ.
1 Ndị Kọrịnt 14: 1-5
Na -achụsịnụ ịhụnanya, na -achọkwa onyinye nke mmụọ, ọkachasị ka unu wee na -ebu amụma. N'ihi na onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche anaghị agwa mmadụ okwu kama ọ na -agwa Chineke okwu; n'ihi na ọ dighi onye nāghọta ya, ma ọ na -ekwu ihe omimi na Mmụọ. N'aka nke ọzọ, onye na -ebu amụma na -agwa ndị mmadụ okwu maka agbamume na agbamume na nkasi obi ha. Onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche na -ewuli onwe ya elu, ma onye na -ebu amụma na -ewuli ọgbakọ elu. Ugbu a, achọrọ m ka unu niile na -asụ asụsụ dị iche iche, ma ka m buokwa amụma. Onye na -ebu amụma karịrị onye na -asụ asụsụ dị iche iche, ọ gwụla ma onye ọ bụla na -asụgharị ya, ka e wee wulie ọgbakọ elu.
1 Ndị Kọrịnt 14: 13-18
Ya mere, onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche kwesịrị ikpe ekpere ka ọ sụgharịa ya. Maka ọ bụrụ na m na -ekpe ekpere n'asụsụ dị iche, mmụọ m na -ekpe ekpere mana uche m adịghị amị mkpụrụ. Kedu ihe m ga -eme? M ga -eji mmụọ m kpee ekpere, ma m ga -ejikwa uche m kpee ekpere; M m ga -eji mmụọ m bụọ abụ, ma m ga -eji obi m bụọ abụ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na i jiri mmụọ gị nye ekele, kedu ka onye ọ bụla nọ n'ọkwa onye mba ọzọ ga -esi sị "Amen" ekele gị mgbe ọ maghị ihe ị na -ekwu? N'ihi na ị nwere ike na -ekele nke ọma, mana onye nke ọzọ anaghị ewuli elu. Ana m ekele Chineke na m na -asụ asụsụ karịa unu niile.
2 Ndị Kọrịnt 3: 2-6
Unu onwe unu bụ akwụkwọ ozi nkwusa anyị, nke e dere n'obi anyị, ka mmadụ niile mara ma gụọ ya. Ị na -egosikwa na ị bụ akwụkwọ ozi si n'aka Kraịst nke anyị nyefere ya, ejighị ink dee ya kama ọ bu Mọ nke Chineke di ndu, ọ bụghị na mbadamba nkume kama na mbadamba nkume nke obi mmadụ. Nke a bụ obi ike anyị nwere site na Kraịst n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị na anyị zuru oke n'ime onwe anyị ikwu ihe ọ bụla si n'aka anyị, mana afọ ojuju anyị sitere Chineke, onye mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ bụghị nke akwụkwọ ozi kama nke mmụọ. N'ihi na akwụkwọ ozi na -egbu, ma Mmụọ na -enye ndụ.
Ndị Galetia 3: 5
Onye na -enye unu Mmụọ Nsọ ma na -arụ ọrụ ebube n'etiti unu ọ na -eme ya site n'ọrụ nke iwu, ma ọ bụ site na ịnụrụ okwukwe-
Ndị Galetia 3: 13-14
Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ nye anyị -n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, "Onye a bụrụ ọnụ ka onye ọ bụla a kwụwara n'elu osisi" bụ, ka ngọzi Abraham wee bịakwute ndị mba ọzọ na Kraịst Jizọs. ka anyị were okwukwe nata mmụọ nke ekwere na nkwa.
“N'ime ya kwa, e biiri gị úgwù site na obibi ugwu nke ejighị aka mee, site n'iwepụ anụ ahụ, site na ibi úgwù nke Kraịst, ebe e liri gị na ya baptizim, nke esitere na ya kpọlite ​​unu na ya site na okwukwe na ọrụ dị ike nke Chineke, onye kpọlitere ya n'ọnwụ. Ma gị onwe gị, ndị nwụrụ anwụ na njehie gị na ebìghị úgwù nke anụ ahụ gị, Chineke mere ka gị na ya dị ndụ, ebe ọ gbaghaara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu ndekọ nke ụgwọ nke kwụgidere anyị na ihe iwu chọrọ. O wezuga nka, kpọgide ya n'obe. "
1 Ya mere, ka anyị hapụ okwu mbụ nke Kraịst, ma ka anyị gaa n’iru ruo izu-oke. Gịnị kpatara na ị na-atọkwa ntọala ọzọ maka nchegharị site n'omume gara aga na maka okwukwe na Chineke? 2 Ma maka ozizi nke baptism na maka ibikwasị-aka nile na maka mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na maka ikpe ebighi-ebi? 3 Ọ bụrụ na Onye-nwe ga-ekwe, nke a ka anyị ga-eme. 4 Ma nke a agaghị ekwe omume nye ndị e mere baptizim otu ugboro 5 ma e detụworị onyinye ahụ sitere n’elu-igwe ire ma nata Mụọ Nsọ, ma etawo ezi okwu nke Chineke na ike nile nke ụwa nke na-abịa., 6 N’ihi na, ka ha wee mee mmehie ọzọ na ka e mee ka ha dị ọhụrụ site na nchegharị, ha na-akpọgide Ọkpara nke Chineke n’obe nke ugboro abụọ ma mee ka ihere meghee ya. 7 N’ihi na ala nke na-aṅụ mmiri ozuzo nke na-adakwasị ya nke ukwuu, ma na-amịpụta ahịhịa ndụ bara uru nye ndị a na-akọ ya, na-anata ngọzi sitere n’aka Chineke; 8 Ma ọbụrụ na ọ ga-amịpụta ogwu na ùgà a jụrụ ya ma ọ dịghị anya ka a mara ya ikpe; ma n'ikpeazụ a ga-akpọ ihe ọkụkụ a ọkụ.